ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: လှစေချင်လွန်းလို့ (ဂရုမထားမိတာလေးတွေ)
Posted by ကြည်ကြည် at 2:10 AM
လပြည့်ရိပ် February 27, 2011 at 2:19 AM
ပိုစ့်လေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ..... အသားအရည်ထိမ်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်းတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။
စူးနွယ်လေး February 27, 2011 at 2:40 AM
သည်ပို့စ်က ၃၀ကျော်တွေမှ ဖတ်သင့်တော့ တို့နဲ့သိပ်မသက်ဆိုင်သေးဘူး :P
Anonymous February 27, 2011 at 3:30 AM
မမရေ ကျေးဇူး ထောသေချာမှတ်သွားတယ်
April22 February 27, 2011 at 4:44 AM
Kay February 27, 2011 at 5:55 AM
အူရှီ ဂရင်းတီး ဆို တာ တော့..တနေ့ တခွက် သောက်ရင်.. နတ်ရေကန် ထဲ ချ လိုက် သလို.. အသက် ၃၀ လောက် ပြန်ငယ် သွားတယ် တဲ့..။ လိုချင်ရင် ပို့လိုက်မယ်..း)
ချစ်ကြည်အေး February 27, 2011 at 7:02 AM
ပုံ / အလိုလိုနေရင်းကို ဖမ်းမမိသူ.....(ချော် ချော်ထွက်သွားလို့....:)
ကိုဇော် February 27, 2011 at 7:43 AM
- အဲဒီလို ဖွဖွလေး မျောက်နှာသစ်ပေးမဲ့ လူရှိရင် ကောင်းမှာဘဲ။
- ဟိုက် . .ဒါကြောင့် နာ ထိပ်တွေ ပြောင်လာတာကိုး။
- ဝက်ခြံကတော့ တစ်လုံး နှစ်လုံးပါ။ ( တစ်လုံး တစ်လုံး အုန်းသီးလုံး )
- ဆံပင်ကတော့ ပေါင်းဘူး။ နဂိုကတည်းက ပါးနေပါတယ် ဆိုမှ။
- ဆပ်ပြာတိုက်တာကတော့ အတော်ကို ချေးများတဲ့သူပါ။
ဟိုက် . . . လျှောက်ရေးမိတာနဲ့ အမှန်တွေ ပေါ်ကုန်ပြီ။
( အသာလေး ပြန်ဖုံးထားခဲ့မှပဲ )
ဂငယ် February 27, 2011 at 6:09 PM
konbanwa... ogengi desu ka?
ကြည့်ရတာ ခေတ်မှီတဲ့ အန်တီကြည်ဆီမှာ မိတ်ကပ်အကြောင်းလာသင်မှပဲထင်တယ်..
သိပ်ကောင်းတာပဲ.. စိတ်ပျက်ဖို့.. :P
ကိုထွဋ် February 27, 2011 at 6:29 PM
နာသာ ၇ နှစ်ငယ်မယ်ဆိုရင် ... ဟီဟီ...
ပဲရစ်ကျောက်ဟီလ်တန် February 27, 2011 at 7:46 PM
ဟယ်...ဒို့က ကတုံးမ...မနက်အိပ်ယာထရင်တောင် မျက်စေ့လောက်ရေဆွတ်တာ..မျက်နှာမသစ်ဘူး..
May everybody be happy and healthy! February 28, 2011 at 3:54 AM
အပြုံးပန်း June 18, 2011 at 4:40 AM
ဒီလို အလှအပနဲ့ ဆိုင်တာတွေ သိပ်မဖတ်တော့တာကြာပြီ၊
အခု ဒါလေး ဖတ်လိုက်ရလို့ သိစရာတွေ သိလာရတယ်၊
Thanks for sharing.We all are the same.There's saying"Beauty is but skin deep" "The wealth of women is beauty"
Take it as you like:D